ihu mbido - Outreach Wiki
Ihe nkiri Gịnị bụ Wikipedia? egosiri na asụsụ Spanish ma nwekwaa obere isiokwu dị n'asụsụ ndị ọzọ.
mgbasa ozi Ka ndị Wikimedia si eme.
Ụlọ mgbaza ozi wiki bụ ebe otu ndị ọzọ na-ahụkwa maka mgbasa ozi na-abiakọta ọnụ tụkọrita aro maka mbunobi ha. Ọ bụ ebe e nwere ọtụtụ mmụta,aro chara acha nakwa ebe nkwado maka atụmaatụ di iche iche maka izijere ọha na eze, nzube omenaala maọbụ nkuzi na ọmụmụ ihe.
Mbunuobi anyị bụ ịkpọbata ndị ọhụụ n'otu Wikimedia ma kwado ha iji nwee ezi mmekọrịta n'ụzọ omenaala nakwa mmụta. Anyị chọrọ enyemaka ndi ọhụụ a iji mee ka mmekọrịta a bawanye, dị mma ma baa uru. E nwere ọtụtụ ihe aga-eme.
Ọrụ a pụrụ iche metụtara nrụkọrịta ọrụ di n'etiti ọba akwụkwọ, ebe nchekwa ihe Omenaala na Ọdịnaala dị iche iche nke ndị oyibo na-akpọ gallaries,archives maọbụ museums. Ọrụ ndi a ga-apụta ihe n'igwe intanetị
Pọtalụ Wikimedia nke gbasara ọgụgụ na mmụta na-ejikọta ndị mmadụ nakwa ihe ọrụ dị iche iche na mba ụwa niile
Retrieved from "https://outreach.wikimedia.org/w/index.php?title=Main_Page/ig&oldid=227441"